!! #၀ှိုက်ကဒ်များ #ဖျက်လိုက်ပြီး #သန်းပေါင်းများစွာသော ၎င်း ၀ှိုက်ကဒ် ကိုင်ဆောင်သူများကိုပန်းရောင် နိုင်ငံသားကဒ်များ | democracy for burma
!! #၀ှိုက်ကဒ်များ #ဖျက်လိုက်ပြီး #သန်းပေါင်းများစွာသော ၎င်း ၀ှိုက်ကဒ် ကိုင်ဆောင်သူများကိုပန်းရောင် နိုင်ငံသားကဒ်များ
tags: 2015 election, Burma, Myanmar, white cards, white vs pink
၀ှိုက်ကဒ်များ ဖျက်လိုက်ပြီး သန်းပေါင်းများစွာသော ၎င်း ၀ှိုက်ကဒ် ကိုင်ဆောင်သူများကိုပန်းရောင် နိုင်ငံသားကဒ်များမကြာမီထုတ် ပေးတော့မည်။
စောင်ကြည့်ကြပါ ။ White vs Pink cr. MYO THEIN
ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် (White Card) မှသည် နိုင်ငံသားဖြစ်ရေးဆီသို့သိန်းစိန်တို့အလျင်အမြန် လုပ်ကြပြီ။
ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် (White Card) နဲ့မဲပေးပိုင်ခွင့်ကို ၀ိုင်းဝန်းကန့် ကွက်ကြလို့အခု သိန်းစိန်တို့ က အလျင်အမြန်ကို နိုင်ငံသားစိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကို မိုးပွင့်စီမံချက်နဲ့အရှိန်အဟုတ်မြှင့် ဆောင်ရွက်နေပြီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ကို ကမန်းကတန်း သတ်မှတ်ပြီး နိုင်ငံသားဖြစ်ရေးအတွက် မဟားဒယား လုပ်ဆောင်ကာ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မဲပေးနိုင်ရေးအတွက် ပြုလုပ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် (White Card) ကိုင်ဆောင်ထားသူ မည်မျှ မည်သူမည်ဝါ မည်သည့်အချိန် အစရှိသည်တို့ ကို သတင်းလုံးဝ ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိခြင်း၊ နိုင်ငံသားသက်သေခံကဒ်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲထုတ်ပေးမှု၌ မည်မျှ မည်သူမည်ဝါ ပြည်သူလူထု သိအောင် တရားဝင် မကြေညာခြင်းသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မမှန်ကန်သော မဲများ များစွာ ထွက်ပေါ်လာစေမည် ဖြစ်သည်။ cr.niknayman
from → 2015 election, Burma, MYANMAR, white vs pink
← #BURMA #Deed of #Commitment for #Peace and #National #Reconciliation #February #12, 2015
“Rohingya” #Bengali #Muslims will #not be #able to #vote in #Myanmar’s #referendum →